Baolina kitra - Amboaran’ny KAF :: Arovana amin’ny fepetra hentitra ny Cnaps Sport atsy Afrika Atsimo • AoRaha
Nigadona soa aman-tsara tany Afrika Atsimo ny delegasion’ny ekipa Cnaps Sport amin’ny taranja baolina, afak’omaly, amin’ny fiatrehany ny lalao tafiditra amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona afrikana (CAF) manoloana ny TS Galaxy rahampitso.
Tsy tokony hisy atahorana ny filaminana noho ny savorovoro misy any Afrika Atsimo satria nametraka fepetra manokana ny Federasiona afrikanina tatsimo mba hiarovana ny delegasiona malagasy, nanomboka tamin’ny fahatongavan’izy ireo tany an-toerana ka hatramin’ny fodian’ny klioba malagasy.
“Nampiana ny mpitandro filamanana hiarovana ny mpilalao malagasy. Nataony maro kokoa mihoatra amin’ny tokony ho izy ireo fiara sy môtô manokatra lalana. Ho feno azy ireo hatrany amin’ny kianja hanazarantena sy ny hotely nivantanana”, hoy Razafimamonjy Fenosoa, tompon’andraikitra amin’ny serasera ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (Fmf).
Vonona ny mpilalao malagasy raha ny nambaran’Andriambololona Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport, na dia eo aza ny famonoana teratany vahiny any Afrika Atsimo. Nohazavain’i Maud Vuyelwa Dlomo, Masoivohoan’io firenena io eto Madagasikara, fa: “nijery ny zava-misy any an-toerana mihitsy izy ireo”. “Hitanay fa ny fampielezana ny vaovao no diso. Roa tamin’ireo olona folo maty ireo ihany no vahiny”, hoy ity diplaomaty ity
Efa niatrika ny fanazarantenany mialoha ny fifandonana rahampitso ireo mpilalaon’ny Cnaps Sport. Miakatra amin’ny lalaom-bondrona avy hatrany ny Cnaps Sport raha tafavoaka mpandresy manoloana ny TS Galaxy.